ख्रीष्टमसमा येशू खै ? - भरोसा खबर
अहिले नेपाल र नेपाली चर्चलाई मात्रै होइन, पूरै विश्वलाई नै ख्रीष्टमसको तातोले लपक्कै छोपेको छ । मिठो खाने, राम्रो वा नयाँ कपडा लगाउने, नाचगान गर्ने, क्यारोलमा रम्ने, एकअर्कालाई उपहार लिनेदिने, व्यापारीहरूले कुम्ल्याउने र कमाउने, नेताहरूलाई चर्चको पुलपिटमा बोल्न दिएर उनीहरूको भाषण सुनेर मख्ख पर्ने, बाइबलमै नभएको सान्ता क्लजलाई चर्चको पहिलो स्थान दिएर, सान्ता क्लजको पोशाक लगाएर उपहार बाँड्दै हिंडेर, ख्रीष्टमस ट्रीलाई अनेकन् किसिमले सजाएर, मरियमलाई देवत्वकरण गरेर, येशूको फोटोअगाडि बसी ख्रीष्टमस केक काटेर, डिसेम्वर २५ तारिख नुहाईवरी शुद्ध भएर, जीवनमा कहिल्यै पनि चर्चको दैलो नटेकेकाहरू ख्रीष्टमसको भोज खान ठाँटिएर चर्च पुगेर, फेसबुकका भित्ता शुभकामनाले पोतिएर, ख्रीष्टमस र्याली गरेर वा यस्ता अनेकन् कार्यक्रमहरू गरेर सारा संसारलाई ख्रीष्टियनहरूले ख्रीष्टमस मनाएको छनक दिने मात्रै होइन, आफू धेरै खुसी भएको जानकारी दिने कोसिस गरिरहेका छन् । यी सबै कुराको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू आफ्नै ठाउँमा छन् । कसैले कुन कुरा राम्रो भन्लान्, कसैले आफैंलाई असल ठान्लान् । माथि उल्लेख भएका धेरै कुरामा येशू हुनुहुन्न तर मानिसको परम्परा र आनन्दको खातिर यी कुरा भइरहेका छन् ।
केही समयपहिले फेसबुकको भित्तामा धेरैले सेयर गरेको एकजना विवादास्पद व्यक्तिको ख्रीष्टमसको बारेमा प्रचारिएको सानो भिडियोको केही अंश हेरें । विश्वासमा परिपक्व ठानिएकाहरूले पनि केही नबुझी धमाधम सेयर गरेको देख्दा ताजुप पनि लाग्यो । उनको भनाइअनुसार येशूको जन्म डिसेम्वर २५ तारिख होइन, उहाँको जन्मदिन कसैले पनि पक्का गरी भन्न सक्दैन किनकि उहाँका बुबाआमा अनपढ भएको कारण योसेफ र मरियमले उहाँको जन्मदिन पक्का गरी हेक्का राखेनन् र त्यसको लेखा पनि पक्का गरी राखिएन । आफैंलाई बाइबलको ज्ञाता र धेरैका आत्मिक बुबा मान्ने तिनलाई बाइबलको सामान्य ज्ञान पनि रहेनछ । येशूको जन्मदिन थाहा हुन नदिनु परमेश्वरको योजनाको भाग हो किनकि आफ्नो पुत्रको कुन जानकारी संसारलाई दिने र कुन कुरा आफैंसँग राख्ने सर्वाधिकार परमेश्वरको हो । तिनले पनि येशूलाई मानवीय पिताको कमजोर सन्तान मात्रै बनाए ।
येशू देहधारी हुनुभएको परमेश्वरको वचन हुनुहुन्छ । उहाँको महिमा परमेश्वरबाट आउनुभएका परमेश्वरका एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो भनेर यूहन्नाले येशूको गौरवलाई उजिल्याउने कोसिस गरेका छन् । येशू नै सृष्टिकर्ता यहोवे परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले मानवजातिलाई पाप र त्यसको परिणामबाट बचाउन मानवचोला लिनुभएको हो ।
येशूको महिमा र महान्ताबिनाको ख्रीष्टमस त बेफ्वाँकको चाड मात्रै हो । उपभोक्तावादी संस्कार र समुदायको बिचमा हामी पनि त्यसैको पछौटे पो बन्दै छौं कि ? येशूलाई पर राखेर शारीरिक अभिलाषा पूरा गर्ने काममा लागिरहेका छौं कि ?
कार्यक्रम र रमाइलोको व्यस्ततामा हामी धेरैले येशूलाई बिर्सिसकेका छौं । येशू त खोपीको देउता मात्रै बन्नुभएको छ । येशूको महिमा हामीबाट हराएझैं लाग्दैछ । येशूलाई बिर्सेर हामी धेरै रमझम र मस्तीमै हराउन थालेका छौं । बाहिरी देखावटी कुराले संसारलाई प्रभावित गर्ने कोसिस गर्दै छौं । येशूको जन्मको सम्झनामा मनाइने उत्सव त उहाँलाई महिमा र इज्जत दिएर अनि उहाँको गुणगान गाएर जातिजातिहरूलाई उहाँको महिमा घोषणा गर्ने शुभोत्सव हो । येशूको महिमा र महान्ताबिनाको ख्रीष्टमस त बेफ्वाँकको चाड मात्रै हो । उपभोक्तावादी संस्कार र समुदायको बिचमा हामी पनि त्यसैको पछौटे पो बन्दै छौं कि ? येशूलाई पर राखेर शारीरिक अभिलाषा पूरा गर्ने काममा लागिरहेका छौं कि ?
अदनको बगैंचामा मानिस परमेश्वरबाट लुक्ने कोसिस गर्न थालेपछि परमेश्वरले मानिसलाई खोज्दै आउनुभयो किनकि उहाँको उत्तम सृष्टिलाई उहाँले त्याग्न चाहनुभएन । मानिसको लागि उहाँले उद्धारको व्यवस्था त्यही समयमै गर्नुभयो । त्यसैको पूर्णताको स्वरूपमा येशू पापीहरूलाई खोजेर बचाउन आउनुभयो । संसारका प्रत्येक मानिसलाई उहाँको बलिदानले परमेश्वरमा उद्धार गर्न सक्छ किनकि उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनुहुनेछ ।
येशूको जन्मदिवस वा उहाँ यस संसारमा आउनुभएको दिनमा मनाइने उत्सवमा उहाँलाई बेवास्ता गर्नु असल कुरा पक्कै होइन । बाहिरी कुरा र उत्सवभन्दा पनि पूरा हृदयले उहाँलाई खोज्ने यो झनै उपयुक्त समय हो । उहाँको वचन र सत्यताको पालना गरेर अनि उहाँको महिमा र प्रेमको बारेमा धेरैलाई बताएर हामीले उहाँलाई प्रशन्न तुल्याउन सक्छौं । हाम्रा पाप र अधर्मबाट फर्केर उहाँलाई खोज्नु जीवनको पहिलो लक्ष्य हुनुपर्छ । ख्रीष्टमसमा येशू हामी सबैको माझमा हुनुहुन्छ तर हामीले उहाँलाई बेवास्ता गरेर सान्ता क्लज वा येशूकी आमा मरियमलाई उचाल्दा सायद स्वर्गदूतहरूले पनि चर्च र हाम्रो जीवनमा येशू खै भनेर सोध्छन् होला । येशूको महिमाको अंश कलस्सीको पत्रमा पावलले यसरी उल्लेख गरेका छन्ः
उहाँ अदृश्‍य परमेश्‍वरको प्रतिरूप, सारा सृष्‍टिका ज्‍येष्‍ठ हुनुहुन्‍छ किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्‍टि भएका थिए। स्‍वर्गमा र पृथ्‍वीमाथि भएका दृश्‍य र अदृश्‍य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्‍वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्‍ति सृजिएका हुन्‌। उहाँ नै सबै कुराभन्‍दा अगाडि हुनुहुन्‍छ र उहाँमा नै सबै कुरा बाँधिएर रहेका छन्‌। उहाँ शरीर, अर्थात्‌ मण्‍डलीका शिर हुनुहुन्‍छ, उहाँ नै सुरु हुनुहुन्‍छ, मरेकाहरूबाट जीवित हुनेहरूमा उहाँ ज्‍येष्‍ठ हुनुहुन्‍छ, ताकि प्रत्‍येक कुरामाथि उहाँ सर्वोच्‍च होऊन्‌ किनकि उहाँको आफ्‍नो सारा पूर्णता ख्रीष्‍टमा वास गरेकोमा परमेश्‍वर प्रसन्‍न हुनुभयो र परमेश्‍वरले उहाँका क्रूसको रगतद्वारा शान्‍ति गराएर पृथ्‍वीको होस्‌ वा स्‍वर्गको होस्‌, उहाँद्वारा नै सबै थोकलाई आफूसँग मिलापमा ल्‍याउनुभयो।
डोटी मा फौजिको प्रकोप, किसान चिन्तित
भरोसा खबर १४ असार २०७७ , डोटी मा फौजि किराले मकै बालि नष्ट गर्न थालिपछि किसाहरु चिन्तित बनेका छन । पाक्ने बेलाको मकै किराले सखाप पार्न थालेपछि किसानहरु �....
राजधानीको युएनपार्कमा गुण्डा नाइके लामा माथि गोली चल्यो, लामा घाइते
काठमाडौं– प्रहरीले काठमाडौंको युएन पार्कमा गुण्डा नाइके अशोक लामामाथि गोली प्रहार गरेको छ । महानगरीय अपराध महाशाखाबाट रेगुलर सर्च अप्रेशनमा खटिएको �....